Google Fit hadda waxaa laga heli karaa Play Store | Androidsis
Google Fit for Android hadda waa la soo dejin karaa
Daabacaaddii ugu dambeysay ee Google I / O Shirkadda weyn ee internetka ayaa ku dhawaaqday Google Fit for Android, adeeg ujeedadiisu tahay in si fool ka fool ah loola tartamo codsiyada caafimaad ee Samsung iyo Apple. Sidaas Google Fit Waxay noo oggolaan doontaa inaan la soconno dhaqdhaqaaqyadeena maalinlaha ah, marka lagu daro xaaladdeena caafimaad.
In kasta oo horay looga heli jiray Android Wear, haddana Google ayaa sii daayay APK-ka si aan hadda ugu dejino Google Fit bilaash taleefannadeenna. Shuruudda kaliya ayaa ah in la helo Android 4.0 ama ka sareeya.
1 Google Fit ayaa hadda laga heli karaa Google Play Store
2 Adoo adeegsanaya websaydhka Google Fit waxaad ku arki doontaa garaafyo muujin doona tillaabooyinka aad qaaday intii lagu jiray usbuuca
Google Fit ayaa hadda laga heli karaa Google Play Store
Marka aan ku soo dejino barnaamijka caafimaadka Google qalabkeena, waxaan ku abuuri karnaa astaan ​​Google Fit tilmaamaya astaamo kala duwan, sida miisaanka, dhererka ama jinsiga, oo aan wax ka beddeli karno wakhti kasta.
Intaas waxaa sii dheer, isticmaalaha aan abuurnay waxaan ka heli karnaa nooca webka ee Google Fit si loo xakameeyo isbeddelkeenna iyada oo aan loo baahnayn in taleefannadeenna casriga ahi ay u dhowdahay. Marka aan helno wax kasta oo la qaabeeyey, waxaan kaliya u baahan doonnaa inaan dhigno tallaabooyinka aan dooneyno inaan bartilmaameed ka dhigno.
Ballanqaadka cusub ee Google ee hawl maalmeedka waxay u taagan tahay fudeydkeeda. Sidan oo kale, Google Fit wuxuu si otomaatig ah u tirin doonaa tallaabooyinkaaga wuxuuna ku tusi doonaa aag si tartiib tartiib ah u buuxin doona markaan soconno. Marka aan dhammaystirno yoolka la dejiyey, giraantan ayaa xirmi doonta oo nagu wargelin doonta inaan la kulannay yoolkeenna maalinlaha ah. In kasta oo ay sii wadi doonto tirinta tillaabooyinkayaga.
Adoo adeegsanaya websaydhka Google Fit waxaad ku arki doontaa garaafyo muujin doona tillaabooyinka aad qaaday intii lagu jiray usbuuca
Dhinaca kale waan arki karnaa, qaarna sawiro runtii dareen leh, diiwaanka hawl maalmeedkeena oo la qabtay usbuucii oo dhan. In kasta oo smartwatch-ka ah la socoshada tallaabada ay aad uga wanaagsan tahay, haddana waxaan ku tijaabiyay HTC One M7 oo si wanaagsan ayey aniga ila shaqeysay markaa, aniga oo tixgelinaya in Google Fit uu gebi ahaanba bilaash yahay, waxba ku lumin maysid isku daygeeda.
Waxaan jeclahay shirkadaha inay sharad ku galaan caafimaadkeena. Markay Samsung soo bandhigtay S-Heath Samsung Galaxy S5, waxay ahayd mid ka mid ah waxyaabaha ugu yar ee aan ka helay qalabka soo saaraha Kuuriya. Iyo in miisaanka culus sida Google uu go'aansado inuu galo suuqan had iyo jeer waa war wanaagsan.
Abka kama helin bakhaarka. :-(
Degelka Google Fit (weli ma shaqeynayo)
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Google Fit for Android hadda waa la soo dejin karaa
Maamuus 6, shirkadda Huawei ee ugu qiimaha jaban uguna fiican ayaa timaada Spain